प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया को लागी प्रोस्टेटवेल - prostatitis उपचार,sciatica उपचार,BPH उपचार लागूपदार्थ,हर्बल निकाल्ने कम्पनी,Medoncare औषधि!
घर » उत्पादन » prostatic hyperplasia
प्रोस्टेटवेल प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया को लागी
प्रोस्टेटवेल छ एक अनुपम सूत्रले इष्टतम प्रोस्टेट आकार र प्रकार्य राख्न मद्दत गर्दछ, र बुढेसकालको प्रक्रियासँग सम्बन्धित हल्का सूजन रोक्न मद्दत गर्दछ. यसले डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोनको नकरात्मक प्रभावलाई कम गर्न पनि मद्दत गर्दछ (DHT), प्रोस्टेट स्वास्थ्य लाई असर गर्ने एक हार्मोन. प्रोस्टेटवेल सूत्रले अस्वास्थ्यकर कोषहरूमा सेल मृत्युलाई प्रेरित गर्न पनि काम गर्दछ र एन्टिऑक्सिडन्ट सुरक्षा प्रदान गर्दछ. छन् 14 समग्र प्रोस्टेट स्वास्थ्यलाई असर गर्ने अद्वितीय कम्पोनेन्टहरू.
सिट्रन, गार्डेनिया, ताजा राइजोमा इम्पेरेट, गोर्डन युरीयल बीज, पेरिला बीज,burdock जरा, Spina मिति बीज, पिनस परागकण, स्टेरकुलिया लीचनोफोरा, मकै कलंक, मेडलर, सुकेको अदुवा, पर्सलेन, डान्डेलियन.
एक स्वस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि को बढ़ावा दिन्छ;
सामान्य कायम राख्न मद्दत गर्दछ, स्वस्थ प्रोस्टेट आकार;
सामान्य कायम राख्न मद्दत गर्दछ, स्वस्थ प्रोस्टेट समारोह;
डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोनको नकरात्मक प्रभाव कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ (DHT) प्रोस्टेट भित्र;
बढ्दो प्रक्रियासँग सम्बन्धित हल्का सूजन रोक्न मद्दत गर्न सक्छ;
उचित मूत्र समारोह राख्न मद्दत गर्दछ;
एपोप्टोसिस प्रेरित गर्दछ (प्रोग्राम सेल सेल मृत्यु) अस्वस्थ कोशिकामा;
स्वस्थ कोशिको समारोह लाई बढावा दिन्छ;
हृदय स्वास्थ्य समर्थन गर्दछ
सिट्रन निकासी (320मिलीग्राम)Ancient मध्यकालीन समयमा प्राचीन देखि, सिट्रन मुख्यतया चिकित्सा उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो: समुद्रीपनको सामना गर्न, फुफ्फुसी समस्याहरू, आन्द्राको व्याधी, स्कर्वी र अन्य विकारहरू. सिट्रन एक्स्ट्र्याक्ट प्रोस्टेट स्वास्थ्यमा सामान्य मूत्र प्रवाहलाई बढावा दिन्छ र मूत्राशयको आराम कायम राख्न सहयोग गर्दछ.
राइजोमा इम्पेरेट एक्सट्रैक्ट(120मिलीग्राम):स्वादमा मीठो, चिसो प्रकृतिमा, यो फोक्सोसँग सम्बन्धित छ, पेट र मूत्राशय च्यानलहरू. रक्तस्राव रोक्नको लागि रगतबाट तातोता हटाउँदछ र डायरेसिस गराउन तातो दूरी हटाउँदछ(मूत्र को उत्सर्जन मा वृद्धि).
डान्डेलियन एक्स्ट्र्याक्ट(140मिलीग्राम):डान्डेलियनमा रसायनहरू हुन्छन् जसले मूत्र उत्पादन बढाउन र सूजन घटाउन सक्छ (सूजन).अनुसन्धानले डन्डेलियनले सामान्य प्रोस्टेट सेल उत्पादन र आकार बढावा दिन मद्दत पुर्‍याउँछ.
पर्सलेन एक्स्ट्र्याक्ट(120मिलीग्राम):Purslane स्नायु सम्बन्धी विकारहरुमा यसको औषधीय कार्यहरुको लागी अनुसन्धान गरिएको छ, मधुमेह, क्यान्सर, अल्सर, माइक्रोबियल संक्रमण, कलेजो रोग, र एक antioxidant र विरोधी भड़काउने रूपमा.
वीर्य Euryales निकाल्नुहोस्(168मिलीग्राम):वीर्य Euyales निकाल्ने detumescence को समारोह छ, टोनिफाइ sp्ग प्लीहा, गर्मी सफा र मवाद निर्वहन. प्रोस्टेट र मूत्र स्वास्थ्य को बढावा मा सकारात्मक प्रभाव छ।
पेरिला बीउ निकाल्ने(200मिलीग्राम): अनुसन्धानले थाहा पायो कि पेरिला बीउ मा निहित polyphenols 5-lipoxygenase गतिविधि रोक्न सक्छ र यस प्रकार विरोधी एलर्जी प्रभाव र विरोधी भड़काऊ प्रभाव छ।
Scaphium Scaphigerum निकाल्नुहोस्(128मिलीग्राम):रक्त वाहिकाहरु को चिकनी मांसपेशिहरु को संकुचन श्लेष्म को सूजन मा सुधार।
मकै सिल्क निकासी(100मिलीग्राम):मकैको रेशममा प्रोटीन हुन्छ, कार्बोहाइड्रेट, भिटामिन, खनिज, र फाइबर. यसले रसायन पनि समावेश गर्दछ जुन पानीको गोली जस्तै काम गर्दछ (मूत्रवर्धक), र यसले रगतमा चिनीको स्तर परिवर्तन गर्न सक्दछ, र सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ.
वीर्य Zizyphi Spinosae निकाल्नुहोस्(140मिलीग्राम):वीर्य ziziphi spinosae प्राचीन चीनी चिकित्सा को सूत्र को मुख्य घटक हो, जो कमी र अनिद्रा को उपचार को लागी प्रयोग गरीन्छ. सूत्र को कार्यहरु रगत पोषण गर्न को लागी हो, स्पष्ट गर्मी, बेचैनी हटाउन, र अनिद्रा को उपचार।
Pinus पराग निकाल्ने(160मिलीग्राम):पाइन पराग, परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा आवश्यक भिटामिन को एक मिश्रण हुन्छ, हार्मोन, र खनिजहरु कि टेस्टोस्टेरोन बढाउने सहित धेरै स्वास्थ्य लाभ छ, पित्त स्राव को नियमन गर्दछ, मांसपेशिहरु लाई पोषण, चयापचय बढाउँछ, दीर्घायु र अधिक लाई बढावा दिनुहोस्.
Medlar निकाल्ने(128मिलीग्राम): Medlar महत्वपूर्ण विरोधी बुढ्यौली प्रभाव मध्यस्थता रिपोर्ट, antioxidant को माध्यम बाट, प्रतिरक्षाविहीन, विरोधी apoptotic गतिविधिहरु र डीएनए क्षति कम गर्न।
Burdock रूट निकाल्ने(180मिलीग्राम): बर्डक रुटमा बहुविध प्रकारका शक्तिशाली एन्टिआक्सीडन्टहरू छन्, क्वेरेसेटिन सहित, लुटेओलिन, र फिनोलिक एसिडहरू। एन्टिओआक्सीडन्टहरूले शरीरमा कोषहरूलाई फ्रि रेडिकलहरूको कारण हुने क्षतिबाट जोगाउँछ. तिनीहरूले उपचार र विभिन्न स्वास्थ्य अवस्थाको संख्या रोक्न मद्दत गर्न सक्छन्. एन्टिऑक्सिडन्ट कार्यले सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ.
सुकेको अदुवा निकाल्नुहोस्(160मिलीग्राम):अदुवा लामो समय पाक र औषधीय प्रयोजन को लागी प्रयोग गरीएको छ। सम्भावित स्वास्थ्य लाभहरुमा मतली कम गर्न को लागी, दुखाइ, र सूजन.